काे-राेनाका कारण निमोनिया हुदाँ देखिन्छन् यस्ता लक्षण ! – Annapurna Daily
काे-राेनाका कारण निमोनिया हुदाँ देखिन्छन् यस्ता लक्षण !
On May 23, 2021 6,233
काे-राेनाका कारण निमोनिया हुदाँ देखिन्छन् यस्ता लक्षण ! को-रोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण निमोनिया हुने सम्भावना पहिलाको तुलनामा धेरै छ । सङ्क्रमितमा को-भिडले गराउने निमोनिया हुनुका साथै निमोनिया तीव्र रूपमा बढिरहेको वा बिरामीको अवस्था गम्भीर हुने सम्भावना पनि पहिलेको तुलनामा तीव्र रूपमा बढिरहेको विराटनगरस्थित न्यूरो कार्डियो एन्ड मल्टी स्पेसालिटी हस्पिटलका मेडिकल अफिसर डा. एमएस अन्सारी बताउँछन् ।
बिरामीहरू ज्वरो आउँदा, खोकी लाग्दा, शरीरको दुखाइ भए पनि लक्षणलाई सामान्य सोचेर वा दुईतीन दिनमै निको हुने सोचेर लापरबाही गरिरहेको उनको भनाइ छ । सङ्क्रमितमा श्वासप्रश्वासमा समस्या भएमा निमोनिया भएको शङ्का गरिन्छ वा हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अलिकति हिँड्दा पनि गाह्रो हुने, थाक्ने तथा सास बढेको जस्तो हुने, अक्जिनको स्तर घट्ने हुनसक्छ, उनले भने, ‘यस्ता लक्षण को-भिडका कारण निमोनिया हुँदा, वा गम्भीर भइसकेपछि देखिने हुन्छ ।’
उनका अनुसार हालको समयमा धेरैजसो सङ्क्रमित होम आाइसोलेसनमा बसिरहेका छन् जसकारण उनीहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । होम आइसोलेसनमा बस्ने सङ्क्रमितमा निमोनिया भएको छ वा छैन भनेर एक्स–रे वा अन्य जाँच नगरी फोनबाट थाहा हुँदैन ।
को- भिड निमोनिया भएका डाक्टरको परामर्श लिएर सङ्क्रमितको अवस्थाअनुसार औषधि खानुपर्ने हुन्छ । भाइरल सङ्क्रमण हुँदा खानपानमा ध्यान दिई, स्वच्छ हावामा बस्ने, घाम ताप्ने प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थको सेवन गर्ने, तातो पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
योसँगै शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गराउन भिटमिन सी, क्याल्सियम, भिटामिन डी, जिङ्क जस्ता औषधिको सेवन गर्न सल्लाह दिइन्छ । घरमै आइसोलेसनमा बसेका बिरामीले ज्वरो, खोकीलगायत को-भिडका अन्य लक्षणलाई मनिटर गर्नुका साथै पल्स अक्सिमिटरको सहयताले हरेक दिन अक्सिजनको स्तर नापिरहनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।
अक्सिजनको स्तर ठिक छ भने आत्तिनुपर्ने स्थिति रहँदैन, उनले भने, ‘तर अक्सिजनको स्तर घटेको देखाएमा (९० प्रतिशत वा सोभन्दा कम) डाक्टरको सल्लाहमा अक्सिजनको प्रयोग गर्नुपर्ने वा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुस : हरेक बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिउँदा यसरी फेरिन्छ शरिर: हामी सबैलाई थाहा छ, मानिसको शरिरले भिन्न किसिमका रसायनहरुमा भिन्न किसिमले प्रतिक्रिया दिन्छ । कुनै पनि रसायन हाम्रो शरिरमा निश्चित मात्रामा नियमितरुपमा भइरहदा प्रतिक्रिया पनि फरक फरक हुन्छ । जस्तै: कागती पानीले शरिरमा पार्ने फरक ।
यस्ता छन्, खाली पेटमा कागतीपानी पिउनुको फाइदा: तौल कम गर्न: मोटोपनाबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने बिहान खाली पेट पानी, कागती र मह सेवन गर्दा पेटमा जमेको बोसो कम हुन थाल्छ । यसले मेटाबोलिजम पनि बढाउँछ ।
मुखको दुर्गन्ध हट्छ: कागतीपानीले मुखको दुर्गन्ध पनि हटाइदिन्छ । शरीरलाई विष रहित बनाउन यसले मद्दत गर्छ ।
जोर्नीको पीडाबाट राहत: जोर्नीको पीडाबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने कागतीपानी पिउन थाल्नुस् ।
भिटामिन सी: शरीरका लागि भिटामिन सी जरूरी तत्त्व हो । यसले रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । बिहानको समयमा यसको सेवनले रोगप्रतिरोधक क्षमता राम्रो हुन्छ । रुघाखोकी जस्ता संक्रमण पनि यसले राख्न दिँदैन ।
पाचन क्रिया राम्रो: बिहान मनतातो पानीमा कागती र मह हालेर पिउनुभयो भने शरीरमा पाचक रस बन्न शुरु हुन्छ । यसले भाृक लाग्न शुरु गर्छ र पाचनक्रियालाई राम्रो राख्न पनि मद्दत गर्छ ।
छालामा निखार: कागतीमा भएको एन्टीअक्सिडेन्ट गुणले छालामा निखार ल्याउँछ । छालाका दागधब्बा सफा हुन्छन् ।
कागतीमा त्यस्तो के हुन्छ र फाइदा गर्छ ? कागतीलाई क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, साइट्रिक एसिड र फस्फोरसको राम्रो स्रोत मानिएको छ । कागती पानी पिउने गरेमा शरीरमा खतरनाक ब्याक्टेरियाको विकास र वृद्धि रोक्न सहयोग पुग्छ । रुघाखोकीको उपचारमा कागती पानी उपयोगी हुन्छ । मस्तिष्कलाई पोषित गर्न र स्नायुकोषहरू स्वस्थ राख्न कागतीले सहयोग गर्छ ।
कागतीले घुँडा र जोर्नीहरूको पीडा कम गर्छ किनभने यसले युरिक एसिडलाई विघटित गरिदिन्छ । एन्जाइम प्रदान गरेर कागतीले कलेजोलाई स्वस्थ राख्छ । कागती पानीले कलेजोमा अक्सिजन र क्याल्सियमको मात्रा सन्तुलन गर्छ । हरेक दिन कागती पानी पिउने गरेमा मिर्गौलामा पत्थरी बन्न पाउँदैन र बनेको पत्थरीलाई विघटित पारेर बाहिर निकाल्न मद्दत पुग्छ । भिटामिन ‘सी’ अधिक भएकाले कागतीबाट हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली सबल हुन्छ ।
कागती पानी पिउने गरेमा शरीरमा अम्ल र क्षारबीचको सन्तुलन बनाउन मद्दत पुग्छ । पेक्टिन फाइबर हुने भएकाले आन्द्राको कोलोनलाई स्वस्थ राख्न कागतीले शक्तिशाली एन्टिब्याक्टेरियल गुण देखाउँछ । बिहान खाली पेटमा कागती पानी पिएमा शरीरबाट विषालु पदार्थ निष्काशनमा सहयोग पुग्छ । कागती पानीले पाचनमा सहयोग पुग्छ । एजेन्सीको सहयोगमा